प्रिय मित्र रवि लामिछाने ! यो भ्रमबाट मुक्त हुनोस - Khabar Break | Khabar Break
रवि लामिछानेजी !आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन आएकाहरुले तपाईको सानो बिन्ती पनि सुनेनन । तपाईले त्यहीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । नारायणी नदी किनारबाट सभाको अन्तिममा तपाईले दोहोर्याई तेहेर्याई भन्नुभयो, ‘मेरो सानो बिन्ती छ, कृपया यो फिल्डमा आजको सभाको कारणले भएको फोहोर संकलन गरिदिनु होला ।’ तर तपाईको यो आग्रह, अनुरोध सभामा आएका कसैले सुनेनन, सुने पनि सेनको नसुने झै गरे । तपाईको कुरा त्यत्तिकै हावामा खेर गयो । अर्थात त्यहाँ आएका मानिसहरुले तपाईको कुरा हावामा उडाएर तिम्रा लागि होइन, अरु नै केहीका लागि आएका हौं, तिम्रो शुभचिन्तक होइनौ भन्दै फोहोर छाडेर आफ्नो असली रुम देखाए । यथार्थ पनि यही थियो, रविजी त्यहाँ आएका मान्छे तपाईंका छँदै थिएनन । तपाईका लागि आएका भए तपाईकै बिन्ती नसुन्ने कुनै ब्यक्ति हुने थिएन । सभामा आएका धेरै जसोले भने रे, ‘हामी तिम्रो लागि भन्दा पनि हाम्रै रोटी सेक्न आएका हौं ।’
रबिजी मख्ख नपर्नु होला, तपाइको लागि ज्यान दिन्छौं भन्नेले तपाइले आयोजना गरेको सभाको अन्तिममा सरसफाइको लागि गरेको एउटा सानो आग्रह पनि किन मानेनन रु त्यँहीबाट मनन गर्नोस, ती को हुन रु किन आए रु के थियो उदेश्य रु सवै दिमागमा आउनेछ । त्यहा त तपाईको गिरफ्तारीको धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरुको लागि सुनौलो अवसर बन्न गयो । एउटा उखान छ, ‘तेरो मायाले भन्दा पनि तेरो बाउको चिन्ताले हो भन्ने ।’ हो त्यस्तै चाहना र निहुले यो सबै भएको हो । तपाई भ्रममा नपर्नोस । यहाँ मान्छेलाई सत्ता गुमेको छट्पटी छ, चुनाबमा हराएको हारेको रिस छ । आफन्त रङ्गेहात पक्राउ परेर अख्तियारको कस्टडिमा रात र दिन बिताएको बद्ला लिनुपरेका छ । सिन्डिकेट चलाउन नपाएका ठग, माफिया र काला ब्यापारीहरुमा यो सरकारले कडाई गरेपछि दुःख दिएको आबेग छ ।
ठेक्कापट्टा लिन नयाँ नियमले नपाएर कालो सूचीहुँदै अख्तियार पुगेका पेटीदेखि ठुला भनिने ठेकदारहरुमा नियमित अर्वौं राज्यको पैसा खान नपाएको झोंक छ । ३० बर्षदेखि २४ वटा सरकारले नछोएको बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर ढुक्क भएको बेला कहिले अख्तियार, कहिले कहाँ बोलाएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको बदला लिनु छ । दूई बर्षमा ३८ क्वीन्टल सुनको तस्करी भएको इतिहास भएको देशमा १८ महिनादेखि ठप्प छ । ३३ केजी सुन प्रकरणका कारण ६६ जनालाई मुद्धा लगाएर कतिपय जेलको हावा खान बाध्य छ । देशका लागि अति राम्रो काम भएपनि के तिनका आफन्त, परिवारको लागि यो सरकार आतंककारी होइन रु तिनीहरु तपाईको गिरफ्तारीलाई ढाल बनाएर अर्कै योजनामा थिए भन्नेबारे जानकारी हुनुहुन्छ ?
गरिब किसान, पोडेहरुको कमाइमा जात्रा, धर्म सँस्कृतीको नाममा स्वाद खान पाइरहेको, कजाउन पाइरहेको, जग्गा जमिन किसानलाई पो दिने भन्दा कुन गुठियारको मन दुख्दैन रु त्यो तपाईको जुलुशमा आउने कि नआउने रु पक्कै आए । गाउँमा कजाएर खान पाइरहेको अवस्थामा गाउँमा बस्ने हरेक किसान जमिनको मालिक बन्दा धनी किसानको हालत के हुन्छ रु धनी किसान यो धनिमारा सरकारको बिरोधमा सडकमा आउने कि न आउने रु गलत धन्दा चलाउने म्यानपावर कम्पनी बन्द भएर बेरोजगार बनेका ठगहरु जहाँ ६ करोड धरौटी राखेर मात्र खोल्न पाउने नियम बनेर ५ हजार म्यानपावरबाट घटेर १२ वटामा सिमित भएकाहरु जुलुसमा आउने कि न आउने रु देशको सूचना बेचेर इन्डियाको तलब भत्ता खाने दशौ हजार कर्मचारी, नेताहरु अब बिगतमा तलब भत्ता खानेको नाम समेत सार्वजनिक हुने डरले थरथर काँपिरहेका रास्ट्रघातीहरु अब सरकार गिराउन सड्कमा आउने कि न आउने ?
काम ठग्न नपाउने अवस्थामा पुगेका कर्मचारीहरु मन्त्रीसँग सचिब र सचिवसँग अन्य बिभागीय प्रमुखहरुले गरेको कार्यसम्पादन संझौताका कारण मुलुक ठग्न नपाइने भयो भन्दै अव ठग्ने सरकार ल्याउन त्यस्ता कर्मचारीहरुले तपाइलाई साथ दिन सडकमा आउने कि न आउने रु
अनि अलि अलि त तपाईलाई साच्चैको प्रहरी प्रसासनले फसाउन लागेको हो कि भनी अन्तर आत्माबाट सहयोग गर्न आए । ती उपस्थितका करिब पन्ध्र प्रतिशत थिए होलान । किनकी हाम्रो प्रहरी प्रसासनले बिगतमा गरेको गल्तीको दोष अहिले पनि भोगिरहनु परेको छ । अहिले प्रहरी साँच्चीकै कामकाजी छ । तर आरोपमुक्त हुन सकेको छैन । बिगतमा प्रहरी प्रसासनले जनतालाई दुख दिएको छ, झुटा मुद्दा लगाएको छ । जेल सार्ने निहुमा समेत आस्थाका बन्दीहरुलाई गोली हानेर मारेको छ । अहिले पनि बिगतकै जस्तो त हुन्न भन्ने केहीलाई लागेकै हो ।
हाम्रो कानुन जो बिगत २९ बर्षदेखि कायम छ । आत्महत्या गर्ने मान्छेले लिखित मौखिक वा संकेत गरेर मरेको छ भने त्यसलाई प्रमाण मान्ने भन्ने कानुन भएको र रबिजीले समेत आबुदाबिमा आत्महत्या गरेकी गोरखाकी अस्टमी गुरुङ्गको यस्तै भिडियो भेटिएपछि उनको पक्षमा त्यो भिडियोलाई देबदुत बनेर आएको भनेको भिडियो त देखेकै हौं त !
त्यस कारण रविजी, नारायणी किनारमा आएकालाई आफ्नो नठान्नोस, मेरो लागि नै आएका हुन भन्ने नसोच्नुस । हो कतिपयमा देशमा भएको हरेक क्षेत्रको अस्तब्यस्तता देखेर आजित छन । सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । सरकार लागेको पनि छ तर हाम्रो बिस्तारादेखि सिंहदरवार र सितलनिवाससम्म सयांै बर्षसम्म जम्मा भएको फोहोर एक दुई बर्षमा सफा चट हुन्न । समय लाग्छ । सरकारको ढिला सुस्ती अनियमितताप्रति खबरदारी गरांै । तपाईं आफ्नो ठाउँमा डटेर लाग्नुस । तर प्रिय मित्र रवि, भ्रमबाट मुक्त हुनोस ।-जनताटाइम्सबाट साभार